सर्वदलीय बैठकमा सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न नेताहरुलाई राष्ट्रपतिको आग्रह – Digital Khabar
सर्वदलीय बैठकमा सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न नेताहरुलाई राष्ट्रपतिको आग्रह
०३ चैत्र, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ । शितलनिवासमा आयोजित उक्त सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र एमाले नेता सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए ।
कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधी र महामन्त्री डा. शशांक कोइाराला सहभागी थिए । उता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ थिए ।
जसपा नेपालबाट अध्यक्षद्धय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, र नेता राजेन्द्र महतो सहभागी थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र राप्रपाबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल र मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहभगाी थिए ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि